Ungenza kanjani ibhodi lendwangu lombhede | Bezzia
UToñy Torres | 14/10/2021 10:00 | Zenzele
Ukuhlobisa indlu ngezindwangu kuyindlela enhle yokuletha ukufudumala nokufudumala kuwo wonke amakamelo. Ikuvumela ngisho ithuba lokuvuselela umhlobiso kalula, ngezinguquko ezimbalwa kanye nokutshalwa kwezimali okuncane. Ngoba awudingi ukuba yingcweti yokuthunga, noma ube namathuluzi amahle kakhulu wokuthunga ngawo, ngoba namuhla kunezindlela eziwusizo kakhulu zokwenza zonke izinhlobo zezinto ngezindwangu.
Kulokhu sizokwakha i-headboard yendwangu yombhede, ucezu lokuhlobisa oluzosiza kakhulu. Lapho ufuna ukuchitha isikhathi esithile ufunda ngaphambi kokulala noma uma ufuna ukucambalala ukuze ubuke i-TV, awudingi amakhushini amaningi. Njengoba i-headboard yakho izokusiza lala phansi ngaphandle kokuhambahamba ubeka amakhushini ngemuva kwalokho. Okusebenziseka kalula, okuhlobisa futhi okulula ukukwenza okubili kokukodwa.
1 Ungayenza kanjani ibhodi lendwangu
1.1 Izinto Ezidingakalayo
1.2 Izinyathelo zokwenza ibhodi lendwangu elenziwe ngezandla
Ungayenza kanjani ibhodi lendwangu
Indlela elula yokwenza i-headboard yendwangu ukuthi ube nomshini wokuthunga. Kungumthungo olula kakhulu ongawenza noma ungeyena umthungi wezingcweti. Futhi ungathola umshini wokuthunga ophathwa ngesandla, ithuluzi elingabizi kakhulu lapho ungenza amalungiselelo amancane futhi wakhe izinto ezilula ezinjengalezi.
Okokugcina, uhlala unenketho yokuthunga ngesandla. Noma umphumela ungeke ufane nalowo otholwe ngokuthunga umshini, Kusewumsebenzi wobuciko futhi noma yimuphi umehluko kuzoba okwenza kukhetheke. Ngama-seams ayisisekelo kakhulu nokubekezela okuningi, ungakha i-headboard yakho yendwangu eyenziwe ngezifiso ngokuphelele.
Okokuqala kuzodingeka silinganise udonga ukuthatha izilinganiso ezidingekayo zezinto zokwakha. Ngokuvamile, i-headboard kufanele ilinganise okufana nombhede noma amasentimitha ambalwa ngaphezulu, yize uyinto eyenziwe ngezandla ngokuphelele ungakhetha isilinganiso osifunayo. Umbhede owodwa, into efaneleke kakhulu ukwenza isiguqo esisodwa njengebhodi eyinhloko. Uma kukhulunywa ngombhede omkhulu, singakhetha phakathi kokwenza isicucu esisodwa noma ezimbili.
Umbhede wamasentimitha angama-90 lezi yizinto esizodinga.
Indwangu ye-Canvas, ngomzimba nokumelana nokuhlala isikhathi eside. Izilinganiso zokugcina zizoba imitha eli-1 ububanzi ngamasentimitha angama-80 ukuphakama. Ngakho-ke sizodinga izingcezu ezimbili zendwangu 1,20 amasentimitha ububanzi ngamamitha ayi-1 ukuphakama, lezi zilinganiso zibheka izibonelelo zomthungo.
Insipho okokuthunga noma umaka.
Inaliti nentambo noma umshini wokuthunga.
Induku yekhethini yesilinganiso esidingekayo nezinye izisekelo zokugxilisa ibha odongeni.
Ukugcwaliswa kwe-fiber yamakhushini.
Izinyathelo zokwenza ibhodi lendwangu elenziwe ngezandla
Okokuqala sizothatha izilinganiso ezindwangu. Sidweba unxande ngesilinganiso esiqondile nomunye onamamitha angaba ngu-5 wemikhawulo yemikhawulo. Lokhu kuzosisiza lapho sithunga uma singeyena uchwepheshe kulezi zindaba.
Sika indwangu nge umkhawulo wangaphandle.
Ngaphambi kokujoyina izingcezu esizoya kuzo qeda imiphetho yezindwangu ngokweqileNgale ndlela sizobavimbela ekutheni bangakhwabanisi.
Manje sizokwakha umphetho kolunye lwezinhlangothi zobubanzi, kuqinisekiswa ukuthi zinhle kakhulu.
Siyaqhubeka nokuthunga izingcezu zendwangu, zalokhu sibhekene nazo futhi sithunga ezinhlangothini ezi-3 ezisele. Ukushiya ingxenye lapho senze khona umphetho ngaphandle kokujoyina.
Siyiphendule sidlulise ipuleti ngokusebenzisa izingqimba ukuze zibe bushelelezi kakhulu.
Manje sizokwakha ezinye izihibe zebhande, kulokhu sizodinga ezine ngesilinganiso semitha elilodwa ububanzi. Izilinganiso zizoba ngamasentimitha angama-4 ubude ngo-20 ububanzi. Sishiya isabelo somthungo, sisika izingcezu zendwangu, sasibekela imiphetho futhi sathunga izingcezu eziphambene, sishiya uhlangothi olulodwa lungamile. Siphendula ucezu, sidlulise ipuleti bese sithunga uhlangothi olungekho.
Ukuqedela izihibe zebhande ake senze izinkinobho ezithile, ungasebenzisa umshini wakho wokuthunga noma uwenze ngesandla.
Sibeka izihibe endwangwini Ukuze wazi ukuthi uzibeka kuphi izinkinobho, qiniseka ukuthi zonke zikude.
Manje sithunga izinkinobho emvilophini yendwangu.
Sithunga izihibe zebhande kolunye uhlangothi lwayo ngemuva kwebhodi lendwangu.
Sivala ngezinkinobho futhi sigcwalisa i-headboard nge-fiber yamakhushini.
Sesivele sinendwangu yekhanda lendwangu eqediwe, kuphela kufanele sibeke izisekelo zensimbi yamakhethini odongeni. Faka ibha ngokusebenzisa izihibe ku-headboard bese uyibeka embhedeni wakho. Ntambama yokuthunga uzoba nebhodi lokubamba ikhanda lakho elisha elungele ukunikeza umoya ohlukile egumbini lakho lokulala.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Zenzele » Ungenza kanjani ibhodi lendwangu embhedeni